THE GURYAHA BOGSIINAYA ASH, SIDA LOO ISTICMAALO WARSHAD DAAWO DHAQAMEED - DHIRTA DAWOOYINKA
Ash - dukaanka cuntada ee nafaqooyinka. In daawada dad, isticmaal dhammaan qaybaha geedka: jilif, ubax, miraha iyo caleemo. Daroogooyinka, oo ay ku jiraan ash, ka badbaadiyo cuduro badan.
Qeexida ash iyo ka kooban dhirta
Ash waa geed dheer oo xoog leh. Caleemihiisa waxay leeyihiin dhibco madow. Caleen kasta waxay leedahay caleemo todobo ama ka yar. Waxay bilaabaan inay sameeyaan ka dib markii muddo ah ubax. Ubaxa - guduud ama bunni, ubax ka hor caleemaha.
Inflorescences waxaa lagu sameeyay ubaxyo dhowr ah. Caadiyan ma haystaan ​​calyx iyo corolla. Geedka kasta waxaa jira waxyaabo badan oo guduudan oo casaan leh, iyada oo caawimaadda ash ee si fudud loo kala saaro geed kale. Muxuu miraha qoyan u eg yahay? Kalluumaysatadan, oo lagu soo ururiyey inflorescence - baqdin.
Ash xagaa barbar-bar dhiga. Wuxuu jecel yahay qoyaan, markaa inta badan geedaha waxaa laga arki karaa balliyada, webiyada, iyo kaymaha qoyan.
Ma taqaanaa? Qulqulku si dhakhso ah ayuu u koraa wuxuuna gaari karaa 60 m dhererka.
Ash waa hodan ku ah maaddooyinka faa'iido leh. Caleemooyinkeeda waxaa ku jira carbohydrates badan, acids organic, cusbada, fitamiin C, tar, carotenoids, qadhaadh, saliidaha lagama maarmaanka ah. Miraha ash waxay leeyihiin qadar badan oo ah borotiinka, dufanka, fiitamiinada P iyo C. Caleemaha dhirta waxaa ku jira alkaloids, coumarins, derivery of phenol iyo sonkorta.
Maaddaama ay ka kooban tahay kiimikada kiimikada qani ah, ash waxay awood u leedahay in ay keento faa'iidooyin badan, sidaa daraadeed qaybaheeda waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo cudurrada xubnaha jirka.
Qodobbada waxtarka leh ee ash ee bini'aadamka
Ash waxay leedahay boogo-bogsiin, dabiici, antipyretic, hemostatic, calool-ridida, qalabka lagu duro, waxay ka caawisaa in la illoobo dirxiga iyo si guul ah u dagaalamaysa qufac iyo xabeeb.
Si loo daweeyo cudurrada bronchial chronic, waxay qaataan decoction ah ee xididdada ash. Marka bararka kelyaha ayaa noqon doona decoction faa'iido leh ee caleemaha geedka, iyo faleebo ah ee ay muujiyaan dhaqdhaqaaqa ka hortag ah Koch sticks. Ashaha saliidaha ee muhiimka ah ayaa kaa saari doona fungi iyo jeermiska ugu fudud. Iyo sidoo kale diyaarinta ash ka caawisaa radiculitis iyo qandho.
Sida loo isticmaalo sifooyinka bogsashada ee ash ee daawada dadweynaha
Ash waxay leedahay muddo dheer oo si guul leh u dhistay daawada dhaqameed. Waxaa lagu daaweeyaa gout, xanuunka, xanuunka kaadi heysta, kelyaha. Waxyaabaha qashinka loogu baahan yahay haweenka qaba dhibaatooyinka cudurada haweenka, ragga waxaa lagu caawiyaa soo celinta iyo kor u qaadista awoodda.
Qodobka Ashen wuxuu siiyaa nidaamka dareemayaasha, faleebo ee caleemaha geedka waxaa loogu talagalay shubanka iyo radiculitis. Qaxwaha qaxwaha leh wuxuu leeyahay qandho iyo bogsiin guryaha. Inta badan waxaa loo isticmaalaa sida duriinka, taas oo ka saarta dheecaanka xad-dhaafka ah ee jirka. Foorno laga bilaabo miraha geedka waxaa loo isticmaali karaa sida diaphoretic ee dagaalka ka dhanka ah polyarthritis.
Codsiga caleenta qoyan
Qalabka cagaaran iyo sifooyinka bogsashada ayaa si ballaaran loo isticmaalaa daawada dhaqameed. Gaar ahaan, a decoction ee jilif geed ayaa loo isticmaalaa si loo daaweeyo hargabka, qandho, iyo bararka kelyaha.
Qaaxada, qaacidada caanka ah waxay noqon doontaa mid waxtar leh: 2 qaado oo of budada ash ku shub 250 ml oo biyo ah karkariyo kari ilaa nus saac. Ka dibna ku adkee, cadaadis qaado oo qaado koob ½ 2 - 3 jeer maalintii.
Dysentery (oo ay la socdaan daroogooyinka kale) qaado qiyaasta soo socota: 2 qaado oo ah ash waa in la kariyaa 40 daqiiqo galaas biyo ah, ka dibna qabow 10 daqiiqo, cadaadis, tuujin. Qaado ½ koob 3-4 jeer maalin kasta cuntada ka hor.
Karinta caleemaha ash
Diyaargarowga ka soo caleemaha ash ee daawada dad waxaa loo isticmaalaa sida calool jilciye, anthelmintic iyo daaweyn loogu talagalay radiculitis.
Tincture of caleemaha dhirta si guul leh ka caawisaa laabotooyinka oo murqaha. Si aad u diyaariso daawadan, hal qaado oo ka mid ah caleemaha warshadda ku shub 250 ml oo biyo ah karkaraya. Iska ilaali inaad u baahato ilaa 10 daqiiqo. Cabbitaanka faleebada ayaa diyaarineysa hal koob saddex jeer maalintii.
Kaadida caleenta caleen waa daaweyn aad u fiican oo ah barar xajmeedka. Si aad u samayso, si taxadar leh u jar caleemaha qalalan ee geedka iyo qaadan nus dhan shaaha ah saddex jeer maalintii ka hor cunto.
Sidee u yihiin miraha ash ee daawada dhaqameedka
Miraha ash ayaa sidoo kale faa'iido u leh daaweynta cuduro badan. Ku faafay khamriga, waxay ka caawiyaan xididdada xagalka. Lionfish waxay awoodaan in ay bogsadaan xitaa boogaha qoto dheer.
Wixii decoction ee midhaha ash, waxaad u baahan doontaa 20 g of dashad. Waxay u baahan yihiin inay ku shubaan 250 ml oo biyo ah oo karkaraya kuna rid 30-40 daqiiqo biyo nadiif ah. Ha u istaag 15-20 daqiiqo kuleylka, subagga marin kaddibna tuujin qalabka cayriin. Daawada waxaa la qaadaa 2-3 jeer maalintiiba.
Mararka qaarkood isticmaalka miraha iyo caleenta ash ayaa si wax ku ool ah u soo saari kara.
Ma taqaanaa? Qarnigii 18aad, England ayaa loo qaaday si loo ilaaliyo midhaha aan qaangaarka ahayn ee dambaska, ka dibna u isticmaal inay u cunaan hilib iyo khudaar.
Ash: sida loo iibsado loona kaydiyo alaabta ceeriin ee caafimaad
Waxaan soo ururin jilif ah guga hore, caleemaha - dabayaaqadii May ama horraantii Juun, iyo midhaha - dayrta. Caleemuhu waxay u baahan yihiin wax yar qallalan qorraxda, ka dibna u guurto qol joogto ah oo hawo leh. Jilibku waa la ururiyaa guga, marka dhaqdhaqaaqa casiirku uu baxo. Ku qallaji qorraxda, waxaadna ku dari kartaa foorno yar oo kulul. Ku kaydi alaabada ceyriinka ah ee bacaha wax lagu duubo.
Contraindications in isticmaalka dhirta
Inkasta oo ay ku jiraan bogsashada, ash waa geedka sunta ah, sidaa darteed qaadashada daawada gudaha waa lagama maarmaan marka la fiiriyo, gaar ahaan haddii bukaanku uu ka qabay hypertension ama atherosclerosis.
Haddii ay dhacdo xaddi badan oo jilicsan ama laga soosaaray caleemaha cagaarka, astaamaha sumowga ayaa laga yaabaa inay muuqdaan: xanuunka caloosha, colic kaneecada, dawakhaad, lallabo, matag. Haddii xitaa aad dareentid mid ka mid ah dhibaatooyinkan soo socda, isla markiiba waxaad ku shubi kartaa caloosha oo leh kiniinka potassium-ka, cab cabitaan saliin leh oo dhuxul leh.
Waa muhiim! Rujiyada cad waxay keeni kartaa xasaasiyad.